संसद बैठकको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास दर्ता हुने - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
काठमाडौं, फागुन १४ : बुधबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले बिहीबार जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुसँग परामर्श गरे । दुबै दललाई प्रचण्ड र माधवको प्रस्ताव छ, ‘सबै मिलेर अगाडि बढौं ।’
प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुका अनुसार मिलेर अगाढि बढ्ने प्रस्ताव नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा राखिएको हो । र, दुबै दलले पार्टीमा छलफल गर्ने प्रचण्ड–माधवलाई जवाफ दिएका छन् । अब नयाँ सरकार गठनका लागि प्रचण्ड–माधव समूह, कांग्रेस र जसपा एक ठाउँमा उभिने सम्भावना रहेको नेताहरुको दाबी छ ।
नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रचण्ड–माधवको सोच के छ ? यसबारे जान्न हामीले यो समूहका केही नेताहरुलाई भेट्यौं । अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा नेताहरुले पार्टीको प्रस्ताव सुनाए, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा (संसद)को बैठक बसेकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने र कांग्रेस–जसपासँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेकै दिन पुस ५ मा नेकपाका ९० सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यद्यपि यो अविश्वासको प्रस्तावको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । सो प्रस्तावमा उल्लेखित प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम पनि परिवर्तन हुन सक्छ ।
संसद सचिवालयका अनुसार यो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्णयमा भर पर्छ । यस विषयमा सभामुख परामर्शमै छन् । बिहीबार सभामुख सापकोटालाई भेटेका प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘जुनबेला (अविश्वासको प्रस्ताव) दर्ता भयो, त्यो बेला संसद विघटन भइसकेको थियो । त्यसकारण उक्त प्रस्ताव आफैँ एक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन बुझ्नुपर्छ ।’
नयाँ प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि आफूहरु तयार रहेको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार कांग्रेस र जसपासँग हुने सत्ता समीकरणको सहमतिले पनि नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
र, यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव अब बस्ने संसदको पहिलो बैठकमा नै टेबल गर्ने प्रचण्ड–माधव समूहको रणनीति छ । नभए सरकारले एकतर्फीरुपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने नेताहरुको आशंका छ ।
‘ओली सुध्रिनेवाला छैनन्, त्यसैले ७६ (१) को सरकार बन्ने कुनै सम्भावना छैन’ एक नेताले भने, ‘हामीले संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव गर्दा पनि मिलेर अगाडि जान्छौं भनेका हौं, अहिले संसद पुनस्र्थापना भएपछि पनि कांग्रेस र जसपा नेताहरुलाई त्यही भनेका छौं । त्यसमा तलमाथि हुँदैनौं ।’
सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामा छ । यद्यपि प्रचण्डले यसअघि नै संसद पुनर्स्थापित भए आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने बताएका थिए । असंवैधानिक संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको पक्षमा उभिएको भन्दै देउवामाथि पार्टीभित्रबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
उनीहरुका अनुुसार अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि ओली पदमुक्त हुनेछन् भने प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । धारा १००(७)मा राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।